Dhererka soo-dejinta! sano 3 4 bilood ka hor #191
Hadda waxaan ahay xubin ka diiwaangashan, wuxuu ahaa xubin jumbo ah, laakiin dhibaatooyin joogto ah oo keliya ayaa la aqoonsaday! Waxay qaadataa 2 + saacado si ay u daba galaan garoonka diyaarada meel u dhow halka aan ku noolahay Oregon. Waxaan haystaa adeegga Wi-Fi aad u dhaqso badan! fadlan kala tali
Allen Davis .... email ... Cinwaanka email Tan waxaa lagu dying from corruption. Waxaad u baahan tahay Add to view.